उनी हाँसिन् र भनिन्- गुड आफ्टरनुन सर, हाउ क्यान आई हेल्प यू?
- नेपाली सन्देश बुधबार, अशोज १७, २०७५ , 8.5K जनाले हेर्नुभयो
मंगलबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कतार एयरलायन्सबाट उत्रिएका एक विदेशी अकमलिँदै अराइभलमा आए।
अलमलिरहेका विदेशीलाई देखेर ड्युटीमा रहेकी प्रहरी जवान उर्मिला लो दुई कदम अगाडि गइन्। मुसुक्क हाँसेर सोधिन्- गुड आफ्टरनुन सर, हाउ क्यान आई हेल्प यु?
ती विदेशी पनि मुस्कुराए, र भने- ह्वेर इज द डमेस्टिक टर्मिनल?
‘दिस वे सर’ भन्दै उर्मिलाले डमेस्टिक टर्मिनल हातले इशारा गरिन्। पाहुना हिँड्न खोजे। ‘ह्याभ अ गुड डे सर!’ उर्मिलाले उनलाई बिदाइ गरिन्।
विदेशी आफ्नो बाटो लागिसकेपछि उर्मिलासँग संवाददाताले सोध्यो- फरर अंग्रेजी बोल्नुभयो त, कति भयो यहाँ बसेको?
उनले हाँस्दै भनिन्- १ वर्ष भयो। विदेशीलाई धेरै कुरा थाहा हुँदैन।सोध्दै आउँछन्। भनिदिनु त पर्‍यो।
पहिला पनि अंग्रेजी बोल्नुहुन्थ्यो?
उनले भनिन्- बोल्न नआउने त होइन तर पहिला बानी थिएन। अस्ति तालिम लिएपछि बोल्न धक लाग्न छोड्यो। सकेको बोल्छु, नसकेको कुरा ड्युटी अफिसर सरकोमा लगिदिन्छु।
उर्मिलाजस्तै अहिले विमानस्थलमा कार्यरत सबै प्रहरी काम चलाउने अंग्रेजी बोल्न सक्ने भएका छन्। देशको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आउने विदेशलाई धेरै कुरा थाहा हुँदैन। स्वभाविक रूपमा उनीहरू प्रहरीको सहयोग लिन खोज्छन्।
प्रहरीले उनीहरूले भनेको नबुझ्दा र आफ्नो कुरा भन्न नसक्दा एकातिर पाहुनाले सहयोग पाउँदैनन् अर्कातिर आत्मियता पाउँदैनन्।
त्यही समस्या समाधान गर्न विमानस्थल प्रहरीले आफूमातहतका प्रहरीलाई अंग्रेजी सिकाएको हो।
‘विमानस्थलमा ओर्लेपछि पहिलो भेट नै प्रहरीसँग हुन्छ। कुनै कुरा थाहा नभएपछि आगन्तुकले प्रहरीसँग नै सोध्ने हो,’ विमानस्थल प्रहरी प्रवक्ता एसपी दिनेश मैनालीले भने, ‘आफूले नबुझेको कुरा प्रहरीलाई सोध्न आउँछन्, प्रहरीले उनीहरूलाई गाइड गर्न सहज होस् भनेर विभिन्न दर्जाका ४ सय १० जनालाई अंग्रेजीदेखि पाहुनालाई गर्ने स्वागतबारे तालिम दिएका हौं।’
मैनालीले विदेशीले सोधेको बेला सही कुरा भन्न सकून् भन्ने उद्देश्य तालिम चलाएको बताए।
तालिममा अंग्रेजीसँगै प्रहरीलाई नागरिक उड्यन, भन्सार, अध्यागमनलगायत विभिन्न कार्यालयका काम र समन्वयबारे पनि पढाइएको छ।
विमानस्थलका प्रहरीलाई विमानस्थलबाट के कुरा लैजान पाउने के नपाउने, अध्यागमनको नियम के? भन्सारको नियम के? र पाहुनालाई कुन तरिकाले सेवा प्रदान गर्ने भन्ने सबै सिकाइएको मैनालीले बताए।
दुई दिनको तालिमपछि प्रहरीलाई बाहिरबाट आउने पाहुनाले सोधेको बेला उनीहरूलाई सही दिशामा पुर्‍याउन सक्ने खालको बनाएको एसपी मैनालीले बताए।
‘पहिला र अहिलेमा धेरै फरक छ, प्रहरीको व्यवहारदेखि उनीहरूले गर्ने काममा पनि,’ मैनालीले भने।
सहयोग चाहिएका यात्रुलाई सही सुझाव दिन विमानस्थलभित्र प्रहरी सहायता कक्ष पनि बनाइएको छ। जुन २४ सै घण्टा खुल्छ।
‘विमानस्थलसँग मुलुकको इज्जत गाँसिएको हुन्छ, हामीले ध्यान दिन सकेनौं भने पाहुनाको मनमा प्रभाव पर्छ,’ विमानस्थल प्रहरी प्रमुख डिआइजी कमल जिटीले सेतोपाटीसँग भने,‘बाहिरबाट आउनेहरूको पहिलो नजर सुरक्षाकर्मीमै पर्ने हो, अग्रेजी बोल्नै नजानेकै कारण सोधेका बेला प्रहरी पन्छिदा राम्रो हुँदैन।’
सबैतिर प्रहरी हुने तर परेको बेला सहयोग गर्न नसक्ने भएपछि प्रहरीलाई तालिम दिएर दक्ष बनाइएको जिटीले बताए।
प्रहरीलाई आफ्नो काम कर्तव्य र विमानस्थलको सम्पूर्ण नीति नियमबारे सचेत बनाउन सके सेवामा सुधार हुनुका साथै अवधै चोरी निकासीमा पनि कम हुने आफूहरूको अपेक्षा रहेको जिटीले बताए।
नयाँ आउने प्रहरीलाई पनि पटक-पटक यसरी तालिम दिने विमानस्थल प्रहरीको योजना छ।
एप्पलबाट बिदा हुँदैछन् आइफोनका ‘डिजाइन गुरु’, आफैँ नयाँ कम्पनी खोल्ने
‘फाइट ब्याक’ को बढ्यो माग